Shiinaha 187ml Anti Glass Green Glass Burgundy Dhalo loogu talagalay Khamriga, Ruuxa, Soosaarayaasha Tonics iyo Alaab-qeybiye | Changyou
187ml Dhalo Cagaaran oo Cagaaran Burgundy oo loogu talagalay Khamriga, Ruuxa, Tonics
Dhaladayada Dhalada ah ee Dhalada ah ee Cagaaran ee Cagaaran oo ah 187ml waa cabirka ugufiican hal adeeg oo khamri ah. Dhaladaan yar ee khamriga ah ee faaruqa ah waxaa laga sameeyay muraayad saafi ah oo tayo sare leh waxaana loo heli karaa hal dhalo ama aluminium dabool leh. Qiyaasta dhaladaani waxay gacan ka geysaneysaa kor u qaadida iibinta khamrigaaga iyo ruuxyadaada, maadaama cabbirka loo qoondeeyey uu si cad ugu qeexayo macaamiishaada. Naqshadeynta naqshadeynta quruxda badan ee caadiga ah waxay ku siineysaa tayada ugu sarreysa & raaxeysiga ugu qiimaha jaban
Dhalooyinkan yar ee khamriga madhan ayaa ku habboon… waad qiyaastay, khamri! Si kastaba ha noqotee, waxaa sidoo kale loo isticmaali karaa sababo badan oo kala duwan. Sidoo kale waa kufiican tahay inay kujiraan jinniyo, tonic, cordials, dhadhamin, khal, saliid & waxbadan! Iyadoo aan loo eegin waxyaabaha ku jira, waxay ku siineysaa dhalo xirfad leh oo hadana shaqsiyadeed si aad ugu soo bandhigto macaamiishaada. Haddii aad ku sameyneyso waxyaabo aad ku sameysid guriga, oo ay ku jiraan waxyaabo ay ka mid yihiin jinniyo la shubay ama khamri macmal ah, waxay sameeyaan dhalada ugu fiican ee lagu soo bandhigi karo hadiyado.
Waxaad ku raaxeysan kartaa dhaqaalaha miisaanka iyo kaliya silsiladaha bixinta waqtiga iyadoo aan loo eegin cabirka dalabka. Waxaan kula talineynaa dhammaan macaamiisha inay dhigaan amarrada tijaabada ka hor intaanay gelin tiro badan. Tani waxay hubin doontaa in baakadeynteennu ay la kulanto shuruudahaaga ka hor inta aan la sameyn maalgashi ballaaran oo maaliyadeed. Haddii aad wax su'aalo ah ka qabtid dhalooyinkeena yar ee khamriga, fadlan la xiriir kooxdayada adeegga macaamiisha.
Dhalooyinka yar yar ee khamriga madhan waxay ku habboon yihiin warshadaha sida soosaarayaasha khamriga, soosaarayaasha cabitaanka, martigelinta, maaraynta dhacdooyinka, hadiyadaha shirkadaha iyo waxyaabo kale oo badan. Iyadoo aan loo eegin shuruudahaaga, waxaad had iyo jeer ka heli doontaa dhalooyinka ugu tayada sarreeya qiimaha ugu hooseeya ee leh dhalada Changyou.
Magaca Badeecada 187ml Burgundy Dhalo
Midab Cagaar qadiim ah ama cagaar madow
Daboolka / Daboolka Fur furka
Loo habeeyay ODM / OEM, waxaan sidoo kale ku daabacan karnaa astaanta ku jirta dhalada adoo adeegsanaya xariir xariir ah, kuleylinta kuleylka kulul iwm.
MOQ 100,000 kumbiyuutar
Shayga sheyga, waxaan ku diyaarin karnaa shixnad hal usbuuc gudihiis.
Alaabooyinka ka maqan, badanaa waxay u baahan yihiin qiyaastii 30 ~ 40days, laakiin waxay ku xirnaan doontaa tirada gooyaha
Dekedda Qingdao / Lianyungang / Shanghai
Maraakiibta Hawada, badda, xawaaraha iwm
Hore: 150ml yaanyada ku dheji ketchup suugo kulul 5 oz dhalo woozy leh dabool iyo faashad yar
Xiga: Kaydso 1oz 2oz 3oz 50ml 100ml 100ml buluug buluug cagaaran oo dhalaalaya dhalaalaya dhalada galaaska saliida ee muhiimka ah oo leh dhibic
700ml 750ml jumlada xardhay rum flint dheeraad ah ...
Shiinaha saaraha 100ml 200ml 250ml 300ml 375ml ...
Saaraha jumlada 30ml 50ml 60ml 75ml 100m ...
750ml dhalada ruuxa wareega ah
Shiinaha soo saaraha jumlada 200ml 375ml 500ml ...